Kalluumeysato la la’aa 6-bilood oo ku xayiran Sri Lanka | KEYDMEDIA ONLINE
Kalluumeysato la la’aa 6-bilood oo ku xayiran Sri Lanka
Waxaa xaalad adag dalka Sri Lanka ku wajahaya dhallinyaro kaluumeysato ah, oo in muddo ah lagu la’aa gudaha badda, waxana la tilmaamayaa in iminka ay go’doon ku yihiin dalkaasi.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ehelada qaar ka mid ah dhallinyaro kaluumeysato ah oo ku xayiran dalka Sri Lanka, kuwaasoo 6- bilood ka hor lagu waayey xeebaha Soomaaliya, xilli ay howlo jilaabasho kaluumeysi ku guda jireen ayaa dalabanaya gacan laga siiyo, sidii ubadkooda dalka dib loogu soo celin lahaa.
Dhallinyaradan oo ay tiradoodu gaareyso 4-qof ayaa 3-dii bishii May ee sanadkan ka ambabaxay xeebta liido iyaga iyo 2 doonyahood oo wateen, waxana muddo 4 bil ku siman ay heehaabayeen gudaha badda, halkaasoo markii danbe ay gurmad kaga heleen ciidamada badda ee Sri Lanka oo u kaxeeyey dalkaasi.
Gudoomiyaha iskaashatada kaluumeysatada ee Dan- Kulmis, Nabadoon Xaaji Kamaal Maki Aweys, ayaa ugu horeyn qiray, in ay ka quusteen nolosha dhallinyaradan, isagoo xusay inuu xiriir la sameeyey Wasaaradda kaluumeysiga, si ay uga qeyb qaadato soo celinta kaluumeysatadan, balse ilaa iyo iminka ma jirto wax jawaab sugan ah oo uga timid dhankaasi.
Wal wal xad dhaaf ah ayaa hareeyey ehelka Kaluumeysatadan, waxana jirta in 6-dii bilood ee la soo dhaafay subax walba ay ku soo jarmaadi jireen xeebta Liido, si akhbaar un ay uga helaan xaalada ubadkooda, waxaase dhawaan wiilashooda ay kala soo xiriireen dalka Sri Lanka.
Waalidiinta oo sheegay in aanay heysan dhaqaale ay u diraan ubadkooda si ay dalka u yimaadaan, ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo Wasaaradda kaluumeysiga in ay kala shaqeyso sidii wiilashooda dib dalka loogu soo celin lahaa, maadaama ay nolosha maalin-laha ah ka caawin jireen qoysaskooda.
Dhallinyarada kaluumeysatada ee ku xayiran dalka Sri Lanka, oo qaar ka mid ah warbaahinta la hadlay, ayaa carabka ku dhuftay in ay wajahayaan dhibaatooyin kala duwan, waxana sida ay tilmaameen ay naawilayaan in ay mar labaad la midoobaan ehelkooda, oo ay noloshooda kaalin muuqata ugu jireen.
Xiriir ay KON la sameysay masuuliyiinta wasaaradda kaluumeysiga ee dowladda Soomaaliya, si aan wax uga weydiino xaaladda kaluumeysatadan iyo wax ay ka ogyihiin arrimahooda, ayey inoo suura gali weysay inaan qadka taleefanka ku helno, balse marka ugu horeysa ee ay inala hadlaan ayaanu idiin soo gudbin doonaa.